Suuqgeynta Mawduuca ee Guriyeynta | Martech Zone
Suuqgeynta Mawduuca ee Real Estate
Isniin, Oktoobar 14, 2013 Isniin, Oktoobar 14, 2013 Adam Yar
Markii aan dhisnay Suugada Wakiilada isku darka boggaga, isdhexgalka IDX, tours, tours mobile, video tours, suuq geynta emaylka, fariimaha SMS iyo daabacan, waxaan ognahay in suuq geynta waxyaabaha ay fure u tahay wadida iibin badan wakiilada. Iyo, maaha wax la yaab leh, wakiilladayada ka faa'iideysanaya barxadda waxay si buuxda u arkaan jawaabta ugu weyn iyo heerarka dhow.
Suuqgeynta Macluumaadka maahan kaliya erey ama hadal aan caddayn, istiraatiijiyad suuq geyn tijaabo ah: runti way shaqeysaa. Xaqiiqdii, suuq-geynta waxyaabaha ayaa la muujiyey inay soo saaraan ugu yaraan saddex jibbaar hoggaamiyeyaal badan halkii doolar sida raadinta lacag-bixinta ah. Xirfadlayaal dhisme ahaan, si kastaba ha noqotee, sameynta waxyaabo ku habboon dhagaystayaashaada ayaa dhib noqon kara. Si kastaba ha noqotee, macaamiisha guryaha waa koox kala duwan, oo ku xiran da 'kala duwan.
Placester waxay soosaartey xogtaan oo kahadleysa sida ugu weyn ee saameyn ugu yeelashada suuq geynta ay u leedahay warshadaha guryaha. Placester wuxuu dhisaa Websaydhada Waxkaqabashada Dhismaha ee isku dhafan naqshadaha quruxda badan, martigelinta, iyo isdhexgalka IDX / MLS.
Tags: is dhexgalka idxinfographicmeel dhigidhantida maguurtadasuuq geynta alaabta guryahasuuq geynta guryahagoobaha guryaha
Powtoon: Abuur fiidiyowyo la soo bandhigay iyo bandhigyo
10 Farqi Oo Udhaxeeya Suuqgeynta Caanka Ah Iyo Baraha Bulshada
Oktoobar 15, 2013 at 4:57 AM
Farriin weyn! Runtii wargelin .. Runtii akhris aad u wanaagsan ayaan qaatay! Waad ku mahadsan tahay wadaagista!